Uploaded by Thet888
အိတြ် ကီး( http://achittatkatho.net)
ကျနော်အမေက ကျနော် ၆ တန်းနှစ်မှာဆုံးသွားတယ်၊ တစ်ဦးတည်းသောသား အဖေနဲ့ပဲ ပျင်းရိငြီးငွေ့စွာနဲ့ပဲ
ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာပေါ့၊ ကျနော် ၉ တန်းရောက်တော့ အဖေက ညဖက် အိမ်ပြန်လာရင်
အရက်တွေသောက်ပြီး ပြန်လာတတ်လာပြီ၊ အဖေအရက်တွေ မူးနေရင်တော့ ဘာမှမပြောတတ်ပဲ
အိပ်ခန်းထဲ ဝင်ပြီး တန်းအိပ်တော့တာ၊ အဖေက သန်တုန်းမြန်တုန်းဆိုတော့ အသက် ၄၀ ဝန်းကျင်၊ ကျနော်
၁၀ တန်းရောက်တော့ နောက်မိန်းမတစ်ယောက် ယူလိုက်တယ်၊ သူထက် ၁၅ နှစ်လောက်ငယ်ပြီး အသားက
နဲနဲညိုတယ်၊ ကိုယ်လုံးကတော့ လုံးလုံးကျစ်ကျစ်ပဲ၊ အဖေမိန်းမ မိထွေး အိမ်ရောက်ခါစက ကျနော်နဲ့
လုံးဝအဆင်မပြေ၊ အဆင်မပြေတာက ကျနော်ဖက်ကပါ၊ အမေနေရာကို ဘယ်သူမှကို မပေးချင်တာ၊
အဖေကတော့ ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ၊ “သားအဖေ မိန်းမယူလိုက်ပြီ… .သူ့နာမည်က အေးမာ…သားက
အမေလို့ခေါ်ချင်ခေါ်နိုင်တယ်…. ဒါမှမဟုတ် အန်တီလို့ ခေါ်နိုင်တယ်” တဲ့၊ ကျနော်ထက်တော့
အသက်အတော်ကြီးတာကိုး၊ အန်တီအေးမာကို ကျနော်ကို အတော်ဂရုစိုက်ပါတယ်၊ ကျနော်ကသာ
လူပျိုပေါက်စ ဖြစ်လာတော့ ဂျစ်ကန်ကန်ရယ်၊ အမေအရင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အသိစိတ်နဲ့ ကျနော်က
အန်တီအေးမာကို ဂျစ်ကန်ကန်လုပ်နေတာ၊ အဖေကတော့ ဘာမှမပြောပေမယ့် စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာ
သိနေတယ်လေ၊ အဖေကတော့ အန်တီအေးမာကို ကျနော်ကို ချော့မော့ဖို့ ကျိတ်ပြီးဆူနေတတ်တာပေါ့၊
၁၀ တန်းစာမေးပွဲတွေပြီးတော့ ကျနော်အိမ်မှာရှိလာတဲ့ အချိန်တွေများလားတယ်၊ အန်တီအေးမာနဲ့လဲ
လက်ပွန်းတတီးဖြစ်လာခဲ့ရတယ်၊ အဖေက မနက်ဆို ၉ နာရီလောက် အလုပ်အတွက် အပြင်ကိုသွားပြီး ညနေ
၆ နာရီကျော်မှ အိမ်ကိုပြန်လာတတ်တာ၊ ဒီတော့ တစ်နေ့လုံး အိမ်မှာ အန်တီအေးမာနဲ့ ကျနော်
နှစ်ယောက်ထည်းရှိတာ၊ နေ့တိုင်းအတူရှိပါများတော့ အန်တီအေးမာရဲ့ နိစ္စဒူဝ အလုပ်တွေကို သိလာခဲ့ရပြီ၊
အဖေ အလုပ်သွားပြီး မနက် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်ဆို အန်တီအေးမာ ရေချိုးတယ်၊ ၁၁ နာရီကျော်ရင် ကျနော်နဲ့
နေလည်စာ အတူစားတယ်၊ နေလည် တစ်ရေးအိပ်တတ်တယ်၊ ညနေဆို ညစာ ချက်ပြုတ်ပြီး ၅
နာရီကျော်ရင် ရေတစ်ကြိမ်ထပ်ချိုး အလှပြင်ပြီး အဖေ့ကို မျှော်တတ်တာပေါ့၊
အန်တီအေးမာ ရေချိုးတိုင်း ထမိန်ရင်လျားပြီး အိမ်ထဲမှာသွားလာတတ်တာကိုလည်း သတိထားမိလာတော့
လူပျိုဖြစ်လာတဲ့ ကျနော်ရဲ့ ရင်ထဲစိတ်ထဲ တစ်မျိုးကြီးခံစားလာရတယ်၊ အဖေနဲ့ စပ်မှ အဖေရဲ့ နောက်မိန်းမ
အမေ(မိထွေး) လို့တော်ရတာ၊ တကယ်တမ်း ကျနော်နဲ့က ဘာမှမတော်လို့စိတ်ထဲခံစားမိတော့
လူပျိုပေါက်ကျနော် ဂျိုကြွလို့ လိင်စိတ်တွေတောင် ထလာမိတာပေါ့၊ ဒီတော့ အန်တီအေးမာ ရေချိုးရင်
ချောင်းကြည့်ဖို့ အားထုတ်မိတော့တယ်၊ ရေချိုးတဲ့နေရာလေးက အိမ်နောက်အပြင်ဘက်မှာ သုံးဘက်ကာထားတာ၊ အိမ်ဘက်ကတော့ အပွင့်ပဲ၊ အိမ်သာကနေဆို ရေချိုးနေတာကို ကောင်းကောင်းမြင်နေရတော့ အန်တီအေးမာ ရေချိုးရင် ကျနော်အိမ်သာထဲကို အပြေးအလွှားသွားတာပေါ့၊ အိမ်သာက ပျဉ်ကာဆိုတော့ ချောင်းကြည့်ဖို့ကလွယ်တယ်လေ၊ အရင်တုန်းကဆိုရင် ကျနော်က မနက်ပိုင်းကျောင်သွားနေတော့ အိမ်တီအေးမာက အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်း လွတ်လပ်ပုံရတယ်၊ အပြင်ဖက်ကလဲ မမြင်ရတော့ ရေချိုးရင်း ဆပ်ပြာတိုက်ရင် လုံချည်ကို ခါးမှာပြောင်းဝတ်ပြီး ရင်သားနှစ်ခုကို သေသေချာချာ ပွတ်သပ်ဆပ်ပြာတိုက်တော့တာ၊ ခန္ဓာကိုယ်က ညိုသော်လဲ ရင်သားတွေကတော့ ဖြူတဲ့ဘက်များတယ်၊ အရမ်းလဲ မကြီးဘဲ ရှောက်သီးလောက်တော့ ရှိမယ်လို့ထင်မိတယ်၊ ပြီးရင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လို့ ထမိန်အောက်ကနေ လက်လျှိုလို့ အမွှေးတွေမဲနေတဲ့ ပိပိကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တော့တာပေါ့၊ အန်တီအေးမာက ရေချိုးလို့ ပြီးသွားရင် ရေစက်လေးတွေကိုယ်မှာ ကပ်လို့ အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာတိုင်း ကျနော်က မျက်နှာနဲ့ ကိုယလ်ုံးမှာ ချွေးတွေသီးလို့ အိမ်သာထဲက ထွက်လာတာနဲ့ အမြဲကြုံနေရတာလေ၊ အန်တီအေးမာကတော့ ကျနော်ကို ကြည့်ပြီး ပြုံးစိစိနဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို သနပ်ခါးလိမ်းဖို့ အဝတ်အစားလဲဖို့တော့ ဝင်သွားတာပဲ၊ ကျနော်လဲ အဲဒီလိုအကြည့်ခံရပါများတော့ စိတ်ထဲသိပ်မလုံခြုံတော့ဘူး၊ ကျနော်အိမ်သာကနေ သူ့ကိုချောင်းနေတာတွေ ပြီးရင် ကိုယတ်ိုင် ဂွေလှိမ့်နေတာတွေ သိများနေလို့လား၊ အဖေတို့ အိပ်ခန်းနဲ့ ကျနော်အိပ်ခန်းက မျက်နှာချင်းဆိုင် အလယ်မှာ အိမ်ရှေ့အိမ်နောက် သွားတဲ့လမ်း အခန်းနှစ်ခန်းကတော့ တံခါးမထားပဲ ခန်းဆီးလေးတွေပဲ ကာထားကြတယ်၊ အန်တီအေးမာ သနပ်ခါးလိမ်းနေတုန်းလဲ ကျနော်အိပ်ခန်းထဲကခန်းဆီးစကြားကနေ ချောင်းကြည့်မိတော့ အန်တီအေးမာရဲ့ ထမိန်က ခါးအထိပြေကြနေပြီး ရင်သားတွေက စူတင်းနေလို့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက ထောင်နေတော့တာ၊ အန်တီအေးမာက ကျနော်ချောင်းကြည့်နေမှန်း ရိပ်မိလို့များ တမင်လုပ်ပြနေလားတော့ မသိ၊ လည်ပင်း ရင်ဘတ်နဲ့ နောက်ကျောကို သနပ်ခါးလိမ်းတာ လုံချည်ကို ဖြေချထားရတယ်လို့၊ စောစောကမှ လှိမ့်ထားတဲ့ ဂွေတောင် ပြန်လှိမ့်ချင်လာပြီ၊ နောက်တော့ ကျနော်ရဲ့ အခန်းဖက်ကိုလှည့်ပြီး ခြေထောက်ကိုဆင်း လုံချည်ကို ပေါင်ရင်းအထိ ဆွဲတင်လို့ ခြေထောက်တစ်ဆုံး သနပ်ခါးလိမ်းတော့တာ၊ ပေါင်နှစ်ချောင်းက ဟလိုက်စိလကိုနဲ့ ပေါင်ကြားထဲက အမွှေးမဲမဲနဲ့ ပိပိက မြင်ကွင်းမရှင်း၊ စိတ်တွေကလဲ ပိပိကို အနီးကပ်သာ ပိုလို့ မြင်ချင်လာတော့တယ်၊ လက်ကလဲ ယောင်ရမ်းလို့ ပုဆိုးအောက်က ပြန်လည်မာတောင်နေတဲ့ လိင်တံကို ကိုင်မိလိုက်တော့တာပေါ့၊ အန်တီအေးမာက သနပ်ခါးလိမ်းပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်တော့ ထမိန်ကို ရင်လျားတောင် မဝတ်တော့ပဲ ခါးမှာပဲ ဝတ်ထားတော့တာ၊ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဘော်လီဝတ်၊ အပေါ်အင်္ကျီဝတ် ပြီးတော့မှ ရေစိုထမိန်ကို လဲဝတ်လိုက်တော့တာ၊ ကျနော်လဲ ခန်းဆီးစ နားကနေ နောက်ကို ဆုပ်လိုက်ပြီး လိင်တံကိုင်ထားတဲ့ လက်က ခပ်သွက်သွက်လေးနဲ့ မြင်ခဲ့ရတဲ့ အန်တီအေးမာရဲ့ အတွင်းသားတွေ မြင်ယောင်ပြီး ဂွေလှိမ့်လိုက်တာ .
သုတ်ရည်တွေ ကြမ်းပြင်ပေါ်ရောက်သွားတော့တာပဲ၊ ကျနော်လဲ နာရီဝက်အတွင်း ၂ ခါလောက် သုတ်ရည်တွေ ထွက်လိုက်ရတော့ မောမောနဲ့ အိပ်ပျော်သွားရောပေါ့လေ၊ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx မွန်းလွဲပိုင်း အိပ်ရာနိုးတော့ ဘောလုံးကန်ဖို့ကလဲ အိမ်နားက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ညနေပိုင်းမှာ ချိန်းထာတော့ ကျနော်အိမ်ရှေ့မှာ ဝတ္တုထိုင်ဖတ်နေတာ၊ ခဏနေတော့ ကျနော်ကို အော်ခေါ်သံကြားလိုက်ရတော့ အန်တီအေးမာက ကျနော်အိပ်ခန်းထဲမှာ ရောက်နေပြီ၊ ပြီးတော့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ကျနေတဲ့ ကျနော်ရဲ့ သုတ်ရည်စက်တွေကို မေးတော့တာ၊ ကျနော်လဲ ဘာပြန်ဖြေရမှန်းမသိ ရှက်နေမိတော့တာပေါ့၊ အဲဒီတစ်ညနေလုံးနဲ့ ညအထိ မျက်နှာပူလွန်းလို့ ကျနော်မျက်နှာချင်းမဆိုင်တော့ဘူး၊ ဘေးအိမ်က သူငယ်ချင်းတွေဆီကိုမှာ သွားနေတော့တာ၊ ညရောက်မှာ တိတ်တိတ်လေး ပြန်လာပြီး ရေချိုး ညစာစားလို့ အိပ်ခန်းတော့ ဝင်နေလိုက်တော့တယ်၊ အဖေတော့ ပြန်ရောက်နေပြီး ထင်ရဲ့ အန်တီအေးမာနဲ့ စကားပြောသံကြားနေရတယ်၊ အိပ်ခန်းထဲရောက်တော့ မနက်ပိုင်း အန်တီအေးမာ ရေချိုးတဲ့ မြင်ကွင်းကို ပြန်မြင်ယောက်လာပြီး အိပ်ရာထဲ တစ်ခါလောက်တော့ ဂွေလှိမ့်လိုက်သေးတယ်၊ နောက်တော့ ကျနော်လဲ အိပ်ပျော်သွားပြီး နောက်နေ့မှ နိုးလားတော့တယ်၊ မနက်အိပ်ရာနိုးတော့ မနက်စာ စားရင်း အဖေနဲ့ စကားပြောရသေးတယ်၊ အဖေက အန်တီအေးမာရဲ့ရှေ့မှာ “ကျောင်းပိတ်ရက် အပြင်ကို လျှောက်မသွားနဲ့ မင်းရဲ့ အန်တီကို အိမ်အလုပ်တွေ ကူလုပ်ပေးဦး” လို့ မှာနေတော့တာပေါ့၊ ၉ နာရီထိုးတော့ အဖေကထုံးစံအတိုင်းပဲ အလုပ်ကိုထွက်သွားပြီ၊ အန်တီအေးမာက ကျနော်ကို “ကြားလား သားအဖေက အိမ်အလုပ်တွေ ကူလုပ်ဖို့ မှာသွားတယ်” လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ ပြောတယ်လေ၊ ကျနော်လဲ အိမ်အပြင်မသွားတော့ပဲ အိပ်ခန်းထဲဝင်လို့ တွေ့ရာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဆွဲဖတ်နေတော့တာ၊ ၁၀ နာရီကျော်တော့ ကျနော်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီး သူလျှော်ထားတဲ့ အဝတ်တွေကို ကျနော်ကို အကူအညီတောင်းလို့ လှမ်းခိုင်းတော့တာ၊ အဝတ်အစားဇလုံကို သွားယူတော့ အန်တီအေးမာက ရင်လျားပြီး ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်လျှော်နေတာ ရင်နှစ်မွှာရဲ့ ကွဲကြောင်းက မြင်နေရတာပေါ့၊ အဝတ်အစားတွေထဲမှာ အဖေရဲ့ အဝတ်အစားတွေ၊ ကျနော်ရဲ့ အဝတ်အစားတွေနဲ့ အန်တီအေးမာရဲ့ အဝတ်အစားတွေ အပြင် သူ့ရဲ့ အတွင်းခံအဝတ်အစားတွေလဲ ပါတာပေါ့၊ အတွင်းခံတွေကို လှမ်းဖို့လုပ်လိုက်တိုင်း ကျနော်ရဲ့ လက်တွေတုန်နေလို့ ရင်တွေတောင် ခုန်နေမိတော့တယ်၊ အဝတ်တွေလှန်းနေတုန်း အန်တီအေးမာက ရေချိုးနေပြီ၊ အဝတ်တွေလှန်းပြီးသွားလို့ ဇလုံကို ပြန်ထားတော့ ရေစိုလုံချည်နဲ့ကပ်နေတဲ့ အန်တီအေးမာရဲ့ ကိုယ်လုံးကို အနီးကပ်မြင်လိုက်ရတာ ထူပူသွားခဲ့ရတော့တယ်၊ ကျနော်လဲ ဇလုံကိုထားပြီး သွားတော့မယ်လုပ်တော့ အန်တီအေးမာက ကျနော်ကို လှမ်းခေါ်ပြီး သူ့ရဲ့ ကျောကုန်းကို ချေးတွန်းခိုင်းတော့တာ၊ ရင်လျားလုံချည်ကို ဖြေချလိက်ုပြီး ရှေ့ဘက်ကလုံချည်စကိုတော့ .
သားက အရွယ်ရောက်ပြီ……ထမင်းစားပြီးရင် မိန်းမတွေအကြောင်း သားကိုသိအောင် ပြောပြမယ်လို့” ပြောတော့ ကျနော်ခေါင်းညိမ့်မိလိုက်တာပေါ့၊ ထမင်းစားပြီး ကျနော်ပန်းကန်းဆေးနေတော့ အန်တီကနောက်ကနေ ရောက်လာပြီး ….လို့မေးတော့ “ဟုတ်” လို့သာ တစ်ခွန်းထဲ ဖြေလိုက်နိုင်တယ် အန်တီရဲ့ မေးခွန်းကဆက်လာပြန်ရော….လက်နဲ့ ဖိထားရင်း နောက်ကို တင်ပါးနားရောက်တဲ့အထိလျှော့ချပေးထားတာပေါ့၊ ကျနော်လက်တွေ တော်တော်သိသိသာသာကို တုန်နေပြီလေ၊ ပထမချေးတွန်းခိုင်းတယ် နောက်တော့ ဆပ်ပြာပါတိုက်ခိုင်းတော့တာ၊ ကျနော်ရဲ့ လက်တွေက ကျောပြင်တစ်ခုလုံးအနှံ့ ရွေ့လျားနေခဲ့ပြီး တခါတလေ လက်တွေက ရင်သားရဲ့ ဘေးဘက်တွေတောင် မတော်တဆ ထိမိသွားခဲ့ရတယ်၊ အန်တီအေးမာက ဘာမှ မပြောခဲ့ပေမယ့် ကျနော်ရဲ့ လိင်တံက ပုဆိုးအောက်ကနေ ရှေ့ကို သိသိသာသာကို ထောင်နေခဲတာပေါ့၊ ဆပ်ပြာတိုက်လို့ပြီးသွားတော့ အန်တီအေးမာက ကျနော်ဖက်ကို လှည့်လိုက်တာ ထောင်နေတဲ့ လိင်တံကို မြင်သွားပြီး ပြုံးစိစိမျက်နှာနဲ့ တစ်ခါတည်းရေချိုးလိုက်လို့ ပြောရင်း လိင်တံထောင်နေတဲ့ ပေါင်ဂွကြားနေရာကို ရေတစ်ခွက်နဲ့ ပတ်လိုက်ပါလေရော၊ ရေအေးအေးထိသွားတဲ့ လိင်တံက ပြန်ပျော့သွားရတာပေါ့၊ ကျနော်လဲ ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီချွတ်လိုက်ပြီး အန်တီအေးမာနဲ့ အတူ ရေဝင်ချိုးလိုက်တော့တာပေါ့၊ ဒီတစ်ခါ အန်တီအေးမာက ကျနော်ရဲ့ ကျောကုန်းကို ပြန်ပြီးဆပ်ပြာတိုက်ပေးတယ်လေ၊ ကျနော်လဲ တစ်ခါတလေ ရေချိုးနေရင်းနဲ့ အန်တီအေးမာရဲ့ ကိယ်ုလုံးကို ခိုးကြည့်မိတယ်လေ၊ ရင်သားနှစ်လုံးက ဖောင်းတင်းနေတော့ လက်နဲ့ ကိုင်ကြည့်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ တဖွားဖွား ဖြစ်နေတော့တာပေါ့၊ ရေချိုးပြီးသွားတော့ မနေ့ကအတိုင်းပဲ အန်တီအေးမာ သနပ်ခါးလိမ်းပြန်တယ်၊ ကျနော်လဲ မနေနိုင်တော့ ချောင်းကြည့်မိရော၊ ကျနော်စိတ်တွေ ထိန်းရခက်နေပါပြီ၊ အန်တီအေးမာရဲ့ ကိုယလ်ုံး ရင်သားတွေကို အနီးကပ်မြင်ချင် ကိုင်ကြည့်ချင်နေခဲ့ပြီလေ၊ ချောင်းကြည့်နေတုန်း ကျနော်ကို လှမ်းအော်တယ်၊ “အဝတ်အစားလဲပြီးရင် ထမင်းစားကြမယ်” တဲ့၊ ကျနော်လဲ ရုတ်တရက်လန့်သွားပြီး “ဟုတ်ကဲ့ အန်တီ” လို့ ပြန်ဖြေရင် အင်္ကျီပုဆိုးတွေ ဝတ်တော့တာပေါ့၊ ထမင်းစားပွဲမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်မိရင်း အန်တီအေးမာက စလို့ စကားပြောတော့တာ၊ …သားက လူပျိုဖြစ်နေပီပဲ…. ဆိုပြီး ကျနော်ရဲ့ ကိုယ်လုံးကို နောက်ကနေဘေးတစောင်းကပ်လို့ လက်ထဲက ပန်းကန်းကိုယူတော့တာ၊ အန်တီအေးမာရဲ့ ရင်သားတွေက ကျနော်ရဲ့ ကျောနဲ့ လက်မောင်းတွေကို ဖိပွတ်သွားတယ်လေ၊ အိကနဲ ဖြစ်သွားပြီး အန်တီက အတွင်းခံဝတ်မထားဘူးဆိုတာ ခံစားလိုက်ရတာပေါ့၊ ကျနော်လဲ လက်ဆေး ပလုပ်ကျင်းပြီး အိမ်ရှေ့ခန်းကနေပဲ အန်တီကို စောင့်နေမိတော့တယ်၊ ခဏနေတော့ .သူဆေးပေးမယ်….ဘယ်လသိုတာလဲ….တဲ့၊ ကျနော် ဖြေရခက်လိုက်တာ ရှက်လည်း ရှက်နေမိတော့ ခေါင်းကိုသာငုံ့လို့ ထမင်းကိုသာ မြန်မြန်ပြီးအောင် စားနေမိတော့တယ်၊ နောက်တော့ အန်တီက ….ဘယ်လိုကွာတာလဲ…. မေးတော့ ကျနော်က ခေါင်းခါပြလိုက်ပြီး ထမင်းကိုဆက်ပြီး စားနေလိုက်တယ်၊ နောက်တော့ အန်တီက…မိန်းမနဲ့ ယောင်္ကျား ဘာကွာလဲ သိလား….…ရည်းစားရော ရနေပြီလား….
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx အနီးကပ်မြင်လိုက်ရပြီး ညိုညက်တင်းရင်းတဲ့ ရင်သားတစ်စုံဟာ ကျနော်ကို ညှိ့ယူလို့ အနားကိုရောက်သွားအောင် ဆွဲဆောင်နေပြီလေ၊ ကျနော်ကိုယ်လုံးကို ရှေ့ဖက်ကိုညွှတ်လိုက်ပြီး နို့သီးလေးတွေကို ခလေးတစ်ယောက်လို့ အငမ်းမရ စို့နေမိတော့တာ၊ အန်တီအေးမာက ကလေးလဲ မမွေးဖူးသေးတော့ နို့စို့ခံရရုံ သက်သက်နဲ့ ဖီလင်တွေ တက်နေခဲ့ပြီး သူမရဲ့ လက်တွေကလဲ ကျနော်ရဲ့ တပေါင်ကြားတစ်နေရာက တစ်စုံတစ်ခုကို ရှာဖွေနေသလိုပဲ၊ မာတောင်နေတဲ့ ကျနော်ရဲ့ လိင်တံက အန်တီလက်ထဲ ရောက်သွားချိန်မှာ မောဟိုက်သံတွေနဲ့အတူ ….ဆိုပြီး အပေါ်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်တော့……………………….သားဟာက သားရဲ့ .သားဟာက သားရဲ့ အဖေထက်တောင် ထွားနေသေးတယ်…. အန်တီလိုချင်နေပြီကွယ်….မိန်းမဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်က ယောင်္ကျားတွေထက်နှုးညံ့တယ် အဆီပိုများတယ် ထိတွေကိုင်တွယ်ရတာ ပိုကောင်းတယ်….ဆိုပြီးရှင်းပြတော့တာ၊ ကျနော်က နားသာထောင်နေရတာ အထိအတွေ့အတွက် အတွေ့အကြုံကမရှိတော့ ဘာတွေမှန်း သေသေချာချာမှန်းကို မသိတော့ဘူး၊ အန်တီအေးမာလဲ အဲဒါကိုသိပုံပေါ်တော့ …... လို့ တဏှာသံနဲ့ ပြောတော့တာ၊ နောက်တော့ အန်တီအေးမာက ကုတင်ပေါ်ကို လှဲချလိုက်ပြီး လုံချည်ကို ချွတ်လိုက်တော့ အဆီကင်းတဲ့ ဝမ်းသား၊ သန်မာထူထဲစွာ ပေါက်နေတဲ့ ဆီးခုန်မွှေးနဲ့ ဖြောင့်တန်းသွယ်ဆင်းနေတဲ့ ပေါင်တံတွေက ကျနော်ရဲ့ လိင်စိတ်တွေ ပေါက်ကွဲထွက်စေခဲ့တာပေါ့၊ စိထားတဲ့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားလိုက်ပြီး ကျနော်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ချိန် မြင်လိုက်ရတဲ့ ပိပိရဲ့ ကြွက်နားရွက်နှစ်ခုက အဝကိုဖုံးကွယ်ထားခဲ့တာပေါ့၊ ရုတ်တရက်တော့ ကျနော်ဘယ်ကစလို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိသေးဘူး၊ အဲဒီအချိန်မှာ အန်တီအေးမာက ….. နေ့ဖက်မှာ ဆန္ဒတွေကို သားပဲ ဖြည့်ဆည်းပေးတော့….သားရဲ့ အဖေနဲ့ အန်တီဆန္ဒတွေ မပြည့်ဝခဲ့ဘူး….သားကို လက်တွေ့ပြမယ်……. လို့ ခေါ်တော့ ကျနော်လဲ လိုက်သွားခဲ့တယ်လေ၊ အိပ်ခန်းအပြင်အဆင်ကတော့ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး၊ အမေရှိစဉ်ကအတိုင်းပဲ၊ အန်တီအေးမာက ကျနော်ရှေ့မှာပဲ ပန်းကန်ဆေးရင်း ရေစိုသွားတဲ့ လုံချည်ကိုလဲတယ် ပြီးတော့ ကုတင်နောက်က တန်းပေါ်မှာ လှမ်းလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ ကျနော်နဲ့ အတူ လာထိုင်တာပေါ့၊ ပြီးတော့မှ ….အန်တီအေးမာ အိမ်ရှေ့ကို ထွက်လာပြီး …..ပြောပြမယ် အိပ်ခန်းထဲကို လာခဲ့….လို့ ပြောတာပေါ့၊ ကျနော်လဲ ကားပေးထားတဲ့ အန်တီအေးမာရဲ့ ပေါင်ကြားထဲကို ဝင်လိုက်ပြီး ကိယ်ုပေါ်ကိုလှဲချလိုက်တော့ အန်တီက ကျနော်ကို ဆီးဖက်လိုက်ပြီး နှခမ်းချင်းနမ်းတော့တာပေါ့၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျနော်ရဲ့ လိင်တံက အန်တီအေးမာရဲ့ ပိပိထဲကို ဝင်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တယ်၊ စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ ဘယ်လိုမှ မအောင်မြင်၊ နောက်တော့ အန်တီကိုယ်တိုင် လိင်တံကိုလက်နဲ့ ကိုင်လို့ ပိပိရဲ့ အဝကိုတေ့ပေးလိုက်တော့ ကျနော်လည်း တောက်လျှောက် ထိုးသွင်းလိုက်တော့ အန်တီအေးမာပါးစပ်က … အား…ကနဲ့ အသံထွက်လားပြီး အရည်တွေရွှဲနေတဲ့ ပိပိထဲကို လိင်တံက ကျဉ်းကျဉ်းကျပ်ကျပ်ပဲ ဝင်သွားပါလေရော၊ အန်တီအေးမာက …ဖြေးဖြေးသားရယ်….
လို့ ပြန်ပြောတာပေါ့၊ အန်တီအေးမာရဲ့ ပိပိက သူမရဲ့ ပိပိအရည်တွေနဲ့ ကျနော်ရဲ့ သုတ်ရည်တွေရောလို့ စိုရွှဲနေပေမယ့် ကျပ်တည်းနေတုန်း၊ ကျနော်ပေါင်ကြားမှာ ဒူးထောက်ပြီးထလိုက်တယ်၊ ပြီးမှ လိင်တံကို တစ်ချက်ချင်းဆောင့်သွင့်းလိုက်တော့ အန်တီအေးမာရဲ့ ညီးသံကြီးက ထွက်လာပါလေရော၊ အောက်ကိုငုံကြည့်မိတော့ ပိပိရဲ့ အဝနဲ့ ကျနော်လိင်တံမှာ နှစ်ဦးပေါင်းထွက်ထားတဲ့ အဖြူရောင်ဖျော့ဖျော့အရည်တွေက စိုရွှဲနေတော့တာကို မြင်လိုက်ရတယ်လေ၊ ကျနော်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်က ရင်သားနှစ်ကိုဆုပ်ကိုင်လို့ အားယူရင်း ဆွဲပြီး ဆောင့်ပေးနေတော့တာ၊ အန်တီအေးမာကလဲ ကျနော်ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေနဲ့ အညီ ဖင်လေးကိုကော့ပေးပြီး မျက်စိမှိတ် ပါးစပ်ကလေးဟလို့ အစွမ်းကုန် ခံနေတော့တာပေါ့၊ လိင်တကိုံ ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ပိပိကြီးက လိင်တံနောက်ကိုဖောင်းကြွလို့ ပါလာပြီး ပြန်ထိုးထည့်လိုက်ရင် ပိပိရဲ့ နှခမ်းသားတွေက လိင်တံနဲ့ ပြန်ပါသွားရော၊ ပိပိကြီးကလဲ ဖောင်းတင်းနေပြီး .ပြန်လာရင် အရက်ကမူးလာတာနဲ့…..လုပ်ပါသားရယ်…အန်တီလဲ ခံချင်နေပါတယ်….လို့ပြောပေမယ့် ကျနော်စိတ်တွေက ဝုန်းဒိုင်းကြဲချင်နေခဲ့ပြီ၊ ဒါကိုသိတဲ့ အန်တီအေးမာက ကျနော်ရဲ့ တင်ပါးကို လက်နဲ့ ဖိထိန်းထားရင်း ငြိမ်အောင်လုပ်ထားတော့တာ၊ ….လို့ပြောတယ်လေ၊ လိင်တံကို ပြန်ထုတ်လိုက် ထိုးသွင်းလိုက်တိုင်းမှာ လိင်တံထိပ်ခေါင်းက ကျင်ကနဲဖြစ်ဖြစ်သွားနေတယ်၊ ၁၀ ခါလောက်ပဲ လှုပ်ရှားလိုက်ရတယ်၊ ကျနော်သုတ်ရည်တွေက ပိပိထဲကို ပန်းဝင်းသွာလေရော၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီး ပြီးသွားကို ကျနော်ရှက်နေမိတာပေါ့၊ အန်တီအေးမာကတော့ …...အခုလဲ အန်တီအရမ်းကောင်းတာပဲ…..အန်တီကို တစ်ပတ် ၂ ခါလောက်တောင် လုပ်မပေးနိုင်တော့ဘူး…..နောက်တစ်ခါထပ်လုပ်ချင်တယ်… လို့ ပြောမိတော့ ….သား…ဖြည်းဖြည်းချင်း စလုပ်ပေးတော့…..သားကလူပျိုစစ်စစ်ပဲ မြန်မှာပေါ့…နောက်ကြရင် ကြာလာတော့မှာ…. ခဏလေးငြိမ်ငြိမ်နေပေးဦး….သားရဲ့ သုတ်ရည်တွေက ပူနွေးနေပြီး အများကြီးပဲ အန်တီထဲကို ဝင်လာပြီ… . အရမ်းပဲ ဆန္ဒတွေ ပြင်းပြတဲ့အရွယ်… သားရဲ့ အဖေကိုယ်စား သားပဲနေ့တိုင်း… အန်တီကို လုပ်ပေးပါတော့….အဖေဟာထက်ကြီးနေတယ်…...အလုပ်က ပင်ပန်းတာနဲ့….လို့ပြောနေတာပေါ့၊ ကျနော်ကတော့ ပထမဦးဆုံး လိင်ဆက်ဆံဖူးတာဆိုတော့ ဘာမှကို ပြန်မပြောနိုင် ဖော်ပြလို့မရနိုင်တဲ့ ဖီလင်တစ်ခုက တစ်ကိုယ်လုံးကို ပျံနှံ့နေခဲ့ပြီး အရမ်းကိုကောင်းနေပြီလေ၊ အန်တီအေးမာရဲ့ ပိပိက စီးစီးပိုင်ပိုင်ဖြစ်နေပြီး လိင်တံကို ဆွဲညှစ်ထားနေသလို ခံစားနေရတယ်၊ နောက်တော့ အန်တီအေးမာက ….သားရဲ့ အဖေက အခု အသက် ၄၀ ကျော်လာပြီ….အန်တီက အခုမှာ ၂၅ နှစ်ကျော်ရယ်….ကောင်းလိုက်တာ….လို့ ပြောတယ်လေ၊ သုတ်ရည်တွေ ထွက်သွားပေးမယ့် ကျနော်လိင်တံက အန်တီအေးမာရဲ့ ပိပိထဲမှာ မာတောင်နေတုန်း၊ ဒါကို သိတဲ့ အန်တီကလဲ လိင်တံပြန်ထုတ်မသွားအောင် ကျနော်ခါးကိုကိုင်လို့ ဆွဲထားတော့တာ၊ ကျနော်လဲ အန်တီအေးမာရဲ့ ဗိုက်ပေါ်မှာတင် လိင်တံကို ပြန်မထုတ်မိပဲ မျက်စိမှိတ်လို့ လှဲနေခဲ့တာပေါ့၊ ၁၀ မိနစ်ကျော်လောက် ကြာမယ်ထင်မိတယ်၊ လိင်တံက လုံးဝပြန်မကျတဲ့အပြင် နောက်တစ်ခါ ထပ်လုပ်ဖို့တောင် အဆင်သင့်ပြန်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ၊ ကျနော်လည်း အန်တီအေးမာကို ….
net)မှ ကူးယူပြီး PDF ဖိုငအ်ဖြစ်ဖန်တီင်္းပေးလိုက်သည်။ (ဒေါက်တာချက်ကြီး) 6/19/2012 အချစ်တက္ကသိုလ် ( http://achittatkatho.လို့ပြောတော့ အန်တီကိုဖက်ထားရင်း ကျနော်အရှိန်ကို မြှင့်လို့ ဆောင့်လိုက်မိတော့တယ်လေ၊ နောက်တစ်ကြိမ် သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်မိတော့ အန်တီက ကျနော်ကို တင်းကျပ်စွာ ဖက်ပေးထားတာပေါ့လေ၊ အဲဒီနေ့က ကျနော်နဲ့ အန်တီအေးမာ ၄ ခါ လိင်ဆက်ဆံဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ညနေ ၆ နာရီကျော် အဖေပြန်လာတော့ ကျနော်တို အရင်အတိုင်းပဲ နေထိုင်လိုက်ကြပြီး ညဖက်တွေမှာ ထပ်မတွေ့ဖြစ်ကြဘူး၊ ဒါတောင်မှ အိပ်ခါနီး ကျနော်အခန်းထဲ ခဏဝင်လာပြီး ပါးကိုနမ်းတယ်၊ ပြီးတော့ လိင်တံကို ပါးစပ်နဲ့ ငုံ လိင်တံထိပ်ကို လျှာလေးနဲ့ တစ်ပတ်ပတ်ပေးသွားပြီး မနက်ဖြန်မှ တွေ့မယ်လို့ ပြောရင်းနှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်ထွက်သွားတော့တာ၊ အန်တီအေးမာက နှုတ်ဆက်သွားပေမယ့် အမြည်းကြွေးသွားသလို ဖြစ်သွားပြီး လိင်တံက ချက်ချင်း မာတောင်လာပြန်ရော၊ အဲဒီညက ဂွေလှိမ့်ပြီး အိပ်လိုက်ရတော့တယ်၊ နောက်ပိုင်း နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တစ်လျှောက်လုံး ပျော်စရာကောင်းခဲ့ပြီး အန်တီအေးမာအတွက် ကျနော်ကနေ့လူ၊ အဖေက ညလူဖြစ်ခဲ့ရတယ်လေ၊ ဒါတောင်တစ်ခါတလေ အဖေမူးပြီး အိပ်ပျော်နေရင် အန်တီက ကျနော်အခန်းလာပြီး အချိန်ပိုဆင်းသွားတတ်သေးတာ၊ နောက် ၂ နှစ်လောက်ကြာတော့ အန်တီအေးမာက ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက် မွေးဖွားပေးခဲ့ပြီး အဖေရဲ့ သားလား မြေးလား မသိ၊ ကျနော်ရဲ့ ညီလား သားလားမသိ၊ တစ်ခုရှိတာကတော့ အန်တီအေးမာရဲ့ သားတစ်ယောက်ဆိုတာကတော့ ကျိန်းသေတယ်လေ၊ ကျနော်တို့ သားအဖနှစ်ဦးရဲ့ သုတ်ရည်တွေက အန်တီအေးမာရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို စီးဝင်နေတုန်းပေါ့၊ အိတ်ကြီး ဖတ်မှတ်သိမ်းဆည်းရလွယ်ကူအောင် အချစ်တက္ကသိုလ်( http://achittatkatho..ကောင်းလိုက်တာ သားရယ်….အမွှေးတွေက ထောင်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်လေ၊ ကျနော်ရဲ့ လက်တစ်ဖက်အမွှေးမဲမဲတွေ ကြားမှာ ပြူထွက်နေတဲ့ အစိကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါလေရော၊ လက်ညှိုးလေးနဲ့ ပွတ်ကြည့်လိုက်တာ အန်တီအေးမာရဲ့ ခါးကကော့တက်လာပြီး ….သားလဲ နောက်တစ်ခါပြီးလိုက်တော့….ကောင်းလိုက်တာသားရယ်…..net) .အားးးးးးးးးးးးးး……ဆိုတဲ့ အသံရှည်ကြီးအော်ညီးပြီး ပိပိက ကျနော်လိင်တံကို အကြိမ်ကြိမ် ညှစ်လို့ ညိမ်ကျသွားပါလေရော၊ အန်တီအေးမာရဲ့ လက်က ကျနော်ကို ဆွဲဖက်လိုက်ပြီး နားရွက်နားကို ကပ်လို့ ….လို့ မောနေတဲ့ အသံကြီးနဲ့ ပြောတော့တာပေါ့၊ အစိကို လက်မနဲ့ ပွတ်ပေးရင်း လိင်တံကိုလဲ ဆက်တကိုအထုတ်အသွင်းလုပ်ပြီး ဆောင့်ပေးလိုက်တာ ၅ မိနစ်ကျော်ကြာတော့ အန်တီအေးမာရဲ့ ပါးစပ်က ….
Documents Similar To နေ့ လူ
a nge to. ye_. kabar
Karma Thaput Oo
ရေမရောတဲ့ နို့ ချိုချို
Say Lo Yar Say Per Tot Shin
Ayine Ayin 1
အပျိုကြီးဆရာမ ရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှု